Heterocycles - APICMO CDMO Manufacturers
Heterocycles inowanikwa mune zvisikwa, nemabasa akawanda emabhizimisi, uye muzvinhu zvose zvehupenyu hwedu. Muzvisikwa zvinowanzoitika nenzira dzakasiyana-siyana, uye vane zvinhu zvakakura zvikuru zvehupenyu hwechimiro - "mutekete ehupenyu." Kushandiswa kweheterocycles inobva mumakemikari, biology, mishonga, zvekurima, uye yebhizimusi ndiro legio.
Chimiro cheheterocyclic kana bhandi yakagadzirwa nemakemikari ane maatomu ane zvinyorwa zviviri zvakasiyana sezvikamu zvedhete .Heterocyclic chemistry ndiro bazi rezvemakemikari rinoshandiswa nehuwandu hwemazana, nzvimbo, uye kushandiswa kwe heterocycles idzi.
Mienzaniso yemakemikari anonzi heterocyclic inosanganisira zvose nucleic acids, ruzhinji rwemishonga, yakawanda biomass (cellulose nezvimwe zvinoshandiswa), uye mazhinji mavara ezvisikwa uye mavara
achiratidza 1-12 of 21 zvawanikwa